Akụkọ - Gini ka i kwesiri ima banyere ime ulo ime ulo?
Clọ ezumike nwere ike ịbụ ụlọ akwụkwọ dị mkpa na ndụ anyị. ma nhazi nke bedchamber dị ọnụ ala ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ nwere ike inwe mmetụta na ọkọlọtọ nke ezumike ndị mmadụ, wee metụ ndụ ndị mmadụ, ọrụ na ọmụmụ ihe. Yabụ agbanyeghị ka ekwesịrị ịhazi ụlọ akwa ụra otu oge a ga-emezigharị ya.
Yabụ kedu ka ị ga-esi họrọ ala nke ime ụlọ? Nnyocha e mere na-egosi na ndị mmadụ na-anọ ọkara n’ime oge ha na-ehi ụra. Ogo nke gburugburu ime ụlọ abụghị naanị metụtara ogo ụra ndị mmadụ, kamakwa ọ na-emetụta ahụike ndị mmadụ. Yabụ, ime ụlọ ihi ụra ga-abụ ihe eco-friendly na ndị na-enweghị mmetọ; ohere Maka ime ụlọ ihi ụra obere ma ọ bụ nke ọkụ na-enwu nke ọma, ị nwere ike ịhọrọ ala na-acha ọkụ nke ga-eme ka oghere ahụ saa mbara ma na-enwu gbaa.
WPC Vinyl flooring Isiokwu:
1.Raw ihe bụ 100% gburugburu ebe obibi
Akụrụngwa nke ala anyị bụ resin PVC dị elu nke bụ gburugburu ebe obibi, nke na-adịghị egbu egbu na nke nwere ike imeghari, enweghị ihe ndị na-emerụ ahụ dịka benzene, formaldehyde, matal dị arọ, enweghị ihe na-agbanwe agbanwe, enweghị ụzarị ọkụ.
Floorlọ anyị nwere nguzogide skid pụrụ iche, oyi akwa na-eguzogide ala ma e jiri ya tụnyere ihe eji akwa ala, Ala anyị dị elu esemokwu mgbe mmiri dị.
3. Antimildew na Antilọ Antibacterial
Floorlọ anyị dị n'elu site na antibacterial pụrụ iche, nhazi ndozi, nwere ike dị ukwuu nke igbu nje, na-egbochi mmeghachi nje bacteria.
4.Ekike na nkasi obi
Floorlọ anyị dị nro, na-agbanwe agbanwe, na-arụ ọrụ nke ọma na nrụpụta ọkụ, na-ekpo ọkụ, ụkwụ efu na-aga ije n'elu ala anyị na-enwe mmetụta na-ekpo ọkụ ma dị mma.
5.Waterproof na Dampproof
Akụkụ bụ isi nke ala anyị bụ vinyl resin, vinyl resin enweghị agụụ na mmiri, ọ gaghị eme mildew n'ihi oke iru mmiri.
6.Iche nzuzu na ìhè
Okpukpo ala anyị bụ 3.2mm -12mm, ibu 2-7.5kgs / sq.m., Ihe na-erughị 10% nke ihe ala dị ala, nwere uru na-enweghị atụ na ibu na nchekwa oghere nke ụlọ elu, nwekwara uru pụrụ iche na ụlọ ochie. nwughari.
ọ bụrụ na ị chọrọ WPC Vinyl ụlọ Soplaya, can nwere ike izipu anyị.
Post oge: Apr-26-2020